शैली | नयाँ विश्व
संसारका १० उत्कृष्ट सेक्स बजार
डोमेनिकन रिपब्लिक क्यारेबियन राष्ट्रमा सेक्स पर्यटन फस्टाउँदो छ । त्यसमध्ये पनि डोमेनिकन रिपब्लिक यस मामिलामा अगाडि मानिन्छ । यहाँको यौन पर्यटनलाई खासगरी महिला यौनकर्मीले थेगिरेहका छन् । यहाँ ६० हजारदेखि एक लाख महिला यौनकर्मी रहेको अनुमान छ । यौन बजारमा ‘पसल थाप्न’ हाइटीदेखिका महिला पनि…
वर्षका ५ उत्कृष्ट नेपाली नायिका, एक नम्बरमा को ?
काठमाडाैं । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मी जगतमा नयाँ नयाँँ नायक नायिका भित्रने प्रचलन बढेको छ । नेपाली समाजमा छिटो समयमा नै सबैको मन जित्न सक्ने नायिक नायिक पनि छन् । ती मध्ये ५ जना कलाकारको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ । कति नम्बरमा कुन कलाकार १.स्वस्तिमा खड्काः…
जुम्ल्याहा बच्चाका फरक–फरक बाबु !
काठमाडौं । (एजेन्सी) चीनमा एक महिलाले जुम्ल्याहा बच्चा जन्म दिइन् तर जुम्ल्याहा बच्चाका बाबु भने फरक–फरक रहेको पुष्टी भएको छ । यो घटना चीनको सियामेन सिटीको हो । डीएनए परीक्षणबाट जुम्ल्याहा बच्चाका बुबा फरक फरक रहेको तथ्य खुलेको चिनियाँ सञ्चार माध्यमलाई उद्दृत गर्दै डेली मेल…
यौन सम्पर्कपछि महिलाले सोच्छन् यी १० कुरा
एजेन्सी । मानव जीवनका लागि यौन सम्पर्क एक पाटो हो । यो सबैलाई आवश्यक हुन्छ । तर, पुरुष भएकै कारण कसैले आफ्नो जोडीले के सोचिरहेकी छन् भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । महिलाले यौन सम्पर्कपछि के सोच्छन् ? रक्सी सेवन गर्ने चाहना यौन सम्पर्कपछि केही…
नेपालकी बुहारी बन्दै बलिउड अभिनेत्री कपूर
काठमाडौं ।बलिउड अभिनेत्री श्रद्धा कपुर एक फोटो ग्राफरसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको मिडिया रिपोर्टमा सार्वजनिक भएको छ। बलिवुडका चर्चित फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठसँग श्रद्धाको प्रेमसम्बन्धरहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो । श्रद्धाले रोहनसँग घरजम गर्न लागेको समाचार तातिएको छ । केहि समय अघि वलिउड अभिनेता फरहान अख्तर र…
मजाको फागुन जानै मा लाग्यो, धड्कन लाग्यो छाती हो.... औला काटी कलम बनावे रगतके मसिया बनावे... यै हो.... हाय हाय रगत के मसिया बनावे सखियाँ । धड्कन लाग्यो छाती हो.... मजाको फागुन जानै मा लाग्यो, धड्कन लाग्यो छाती हो.... बागलुङ। देशभर होलीको रौनक छ, युवायुवतीहरु…
काठमाडौं । खुशीको पर्व होलीको रौनकले धपक्कै काठमाडौं बलेको छ । भाईचारा र मैत्रीपूर्ण समवन्धमा रमाउन चाहने नेपाली समाजका लागि होलीको परम्परागत मान्यता जत्तिकै मैत्रीभाव प्रकट गर्ने पर्व भएको छ । मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश पर्व फागुपर्व आज एकआपसमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाइँदैछ…
यी चार राशिका मानिसहरुमा हुन्छ अद्भूत क्षमता !
काठमाडौं । ज्योतिषी भाषाअनुसार भन्ने हो भने तपाईहाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ ।आधुनिक युगमा जीइरहेकाले हामी ज्योतिषीसँग खासै सरोकार राख्दैनौं । तर, सत्य यो पनि हो कि जो समस्या जोतिषीद्वारा हल गरिन्छ, त्यो…
आफ्नो राशी अनुसार कुन राशीसँग विवाह गर्दा उत्तम हुन्छ ?
काठमाडाैं। के तपाईंहरु श्रीमान श्रीमतीको सँगको सम्बन्ध राम्रो छैन ? के तपाईहरु एक आपसमा झगडा गरिरहनुहुन्छ । यस्तो तव हुन्छ तपाईहरुको ग्रह अनुसारको स्वभावमा मेल खाँदैन । पति पत्नीबीचको तनावका कारण राशि पनि हुन सक्छ । आउनुहोस् जान्नुहोस् तपाईको कस्तासँगको सम्बन्ध राम्रो र नराम्रो हुन्छ…
शरीरको कुन अंगको कोठीले के संकेत गर्छ ? जानिराखौँ
काठमाडौं । शरीरका विभिन्न अंग र त्यसको लक्षणका आधारमा व्यक्तिको चरित्र जान्न सकिने सुनिन्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित समुद्रशास्त्रमा यसबारे वर्णन गरिएको छ । शास्त्रमा धेरै माध्यम उल्लेख छन् ।जसले व्यक्तिको चरित्र संकेत गर्दछ । त्यसमध्ये कोठी पनि एक हो । शास्त्रमा शरीरको कुन अंगमा…